Puntland: “Cidda tanaasushay waa annaga iyo Jubaland “
Home WARARKA Puntland: “Cidda tanaasushay waa annaga iyo Jubaland “
Puntland-(Berberanews)-Maamulka Puntland ayaa iska fogeyay eedaha dowladda federaalka Somalia ay u jeedisay maamullada Puntland iyo Jubalnd ee ahaa in dhankooda ay wax ka socon waayeen kadib markii uu natiijo la’aan ku soo dhamaaday shirkii looga hadlayay khilaafka doorashooyinka ee maalmahaanba madaxda federaalka, kuwa maamul gobaleedyada iyo gobalka Banaadir uga socday magaalada Muqdisho.
“Shir fahsilmay ma jirin madaxweynaha wakhtigiisu dhamaaday ee Farmaajo ayaa codsaday in la soo kala nasto dibna la isugu soo noqdo kabacdina shir jara’id ayuu qabtay wasiir Dubbe intaasaan ognahay annagu” ayuu yidhi wasiirka warfaafinta Puntlaand Cabdullaahi Cali Xirsi Timo-cadde.
Inkasta oo dowladda Soomaaliya sheegtay in labada maamul ee Puntland iyo Jubaland ay wax ka socon la’yihiin oo caqabad ku noqdeen xal laga gaadho khilaafka doorashooyinka haddana wasiir Cabdullaahi Cali Xirsi Timo-cadde oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in labadaan maamul ee ah iyaga iyo Jubaland ayba yihiin cidda dooneysa in Soomaaliya ay badbaadiyaan.
“Cidda tanaasul sameysaa annaga weeye cidda rabta in Soomaaliya ay badbaadiso innaga weeye labada dowlad gobaleed weeye diyaar ayaana u nahay in meel walba oo la isugu yimaada la garnaqsado”ayuu yidhi Wasiir Timo-Cadde.
Dowladda ayaa sheegtay in wax lagu xumaado ay tahay in labada madaxweyne aanay oggoleyn doorasho.
“Xukuumaddu waxaa ay maanta u caddayneysaa umadda Soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee Puntland iyo Jubaland aysan rabin in dalkaan ay ka dhacdo doorasho uu aas-aaskeedu yahay heshiiskii 17-kii September iyo is fahankii 16-kii February.
Arrintaan ayaa kusoo beegmaysa xilli uu fashilmay shirkii horudhaca ahaa ee ka socday gudaha xerada Xalane ee magaalada Muqdisho oo u dhexeeyay madaxda dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Khilaafka Doorashada Somalia
Previous articleIran oo ka hadashay markab ay leedahay oo lagu weeraray Badda cas
Next articleMaraykanka oo dub u bilaabay kaalmadii dhaqaale ee Falastiin